» प्युठानमा के भयो यस्तो ? आमा छोरा एकातिर झुन्डिएको अबस्थामा फेला,यस्तो खबर सुन्नासाथ वुबा भिरबाट हाम्फाले, (भिडियो सहित) प्युठानमा के भयो यस्तो ? आमा छोरा एकातिर झुन्डिएको अबस्थामा फेला,यस्तो खबर सुन्नासाथ वुबा भिरबाट हाम्फाले, (भिडियो सहित) – हाम्रो खबर
प्युठानमा के भयो यस्तो ? आमा छोरा एकातिर झुन्डिएको अबस्थामा फेला,यस्तो खबर सुन्नासाथ वुबा भिरबाट हाम्फाले, (भिडियो सहित)
दाङ। नौबहिनि गाउपालिका वडा नं. २ लिघामा एकै परिवारका तिन जनाको मृत्यु भएको छ। दश महिनाको छोरा सहित श्रीमती उतिसको रुख मा झुण्डीएको र यो सब थाहा पाएपछि श्रीमान् पनि भिर बाट हाम फालेका थिएका थिएनौ ।
मृतकका बुबाको अनुसार घरमा कहिले काही छोरा-बुहारीको घरायसी कुरामा झगडा हुन्थ्यो। बुढा-बुढीको झगडा त हो हामि किन बोल्ने आज हामि बोलेर केहि भने पनि भोलि तिनीहरु एक हुन्छन भनेर हामिहरुले केहि भन्ने थिएनौ। घरको काम सबै हामिनै गर्दथ्यौ बुहारीलाई केहि भन्ने थिएनौ , सानो छोरा छ त्यसैको स्याहारसुसार मात्रै गर्थी। अहिले केहि नगरे पनि पछि आफ्नो हातमा हुन्छ अनि गर्छन भनि हामीहरु केहि भने
के कारणले हो हामीहरुलाई केहि थाहा छैन बुहारीले यस्तो निर्णय लिन पुगेको , के पुगेको थियन र यस्तो गरिन ,त्यो सानो बालकको के गल्ति थियो र उसलाई पनि संगै लागेको होला। भन्दै रुदै मिडिया सामु दुख पोखेका छन।
पुरा भिडियो हेर्नुहोस..